Heshiiska uu James ugu biirayo United oo Axada lagu dhawaaqayo | TOP NEWS
Heshiiska uu James ugu biirayo United oo Axada lagu dhawaaqayo
By Mohamed Abdulle Hassan on May 17, 2017 No Comment
Warbaahinta gudaha ee dalka Colombia gaar ahaan idaacadda Caracol oo ka mid ah kuwa ugu afka dheer ayaa xaqiijiyay in lagu dhawaaqi doono heshiiska maalinimada Axadda ah kadib kulanka ay Real Madrid la leedahay Malaga.
Real Madrid waxey habeen dambe la ciyaari doontaa Celta Vigo oo ay booqan doonto, balse afar maalmood kadib waxey mar kale booqan doontaa Malaga si ay u xaqiijiso iney tahay horyaalka Spain ololahaan 2016/2017 waa hadiise ay 4-dhibcood kaliya ka hesho labada kulan.
Wiilka tayada wanaagsan ee ah kan ugu fiican ee ay eegtaan dadka Colombia ayaa ka mid noqday qorshaha labaad ee Zinedine Zidane balse waxaa la fahansan yahay inuu jamaahiirta Los Blancos macsalaameeyay kulankii Sevilla.
James Rodriguez wuxuu doorbidayaa inuu helo boos joogto ah isagoo ku suguan koox weyn, Red Devils ayaana ula diyaar ah hamigiisa iney u hirgaliso.
Heshiiska uu James ugu biirayo United oo Axada lagu dhawaaqayo added by Mohamed Abdulle Hassan on May 17, 2017